आजदेखि काठमाडौं उपत्यकाको निषेधाज्ञा खुकुलो, के-के गर्न पाइन्छ ? - नेपालबहस
आजदेखि काठमाडौं उपत्यकाको निषेधाज्ञा खुकुलो, के-के गर्न पाइन्छ ?
| ८:१४:४९ मा प्रकाशित
२१ जेठ, काठमाडौं । आजदेखि काठमाडौं उपत्यकाको निषेधाज्ञा केही मात्रा खुकुलो गरिएको छ । उपत्यकामा केही खुकुलो बनाएर १० दिन थपिएको निषेधाज्ञा आजबाट लागू भएको हो ।
जेठ १४ गतेदेखि किराना पसलहरु समेत बन्द गरेर एक साताका लागि कडा निषेधाज्ञा गरिएकोमा आजदेखि भने केही सेवा चल्न दिनेगरी नयाँ व्यवस्था गरिएको हो । तर पनि १० दिनका लागि थप गरिएको निषेधाज्ञा अवधिभर तोकिएका अन्यावश्यक काम, सेवाबाहेक अन्य केही गर्न पाइने छैन ।
एकहप्ताअघि जेठ १४ मा थपिएको निषेधाज्ञामा भने खाद्यान्न पसलसमेत खोल्न नपाइने नियम लागू गरिएको थियो । त्यसको चौतर्फी आलोचना समेत भएपछि पुनः आजबाट किराना तथा खाद्यान्न पसलहरु बिहान ९ बजेसम्म खोल्न पाउने निर्णय गरिएको हो ।
अत्यावश्यक वस्तुहरु– तरकारी, फलफूल, दूध, मासुलगायतका पसल पनि बिहान ९ बजेसम्म खोल्न पाइनेछ । अन्य पसल सामान्यतया खोल्न निषेध गरिए पनि यदाकदा लुकीछिपी पसलहरु सञ्लान नै भइरहेको समेत पाइएको छ ।
स्कुल, कलेज लगायत शैक्षिक संस्थाहरु भने बन्द नै रहने भएका छन् । वैदेशिक अध्ययनमा जाने विद्यार्थीको हकमा भने कूटनीतिक नियोग तथा अन्य निकायबाट हुने भिसा प्रक्रियामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सहजीकरण गर्ने भएको छ ।
अत्यावश्यक बाहेकका सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक संस्थान र बिमा लगायतका कार्यालय पनि बन्द नै रहने छन् । राति १० बजेदेखि बिहान ९ बजेसम्म मोटरसाइकल वर्कसप भने खोल्न दिइने भएको छ ।
संक्रमणको उच्च जोखिमका कारण पनौती जात्रा स्थगित ८ मिनेट पहिले
बेलायतले जनस्वास्थ्यका क्षेत्रमा दिने सहायता बजेट कटौती १९ मिनेट पहिले
कालीगण्डकीमा आएको बाढीले सेतीवेणीका ८ घर डुबानमा ३१ मिनेट पहिले
एनसीसी बैंकको शेयरमा खरीद चाप उच्च ३४ मिनेट पहिले
बाढी पहिरो प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार र राहत कार्य प्रभावकारी बनाउन प्रचण्डको आग्रह ३८ मिनेट पहिले
डाइभर्सनले पूर्वपश्चिम राजमार्गमा यातायात सञ्चालन गर्न सास्ती ४६ मिनेट पहिले
डोटीमा पहिरोमा च्यापिएर एकको मृत्यु, दुई बालिका घाइते ५७ मिनेट पहिले
प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्धामा बारले तोक्यो एमिकस क्युरी १३ घण्टा पहिले
झलनाथ खनाल अक्सिजनको सपोर्टमा २ दिन पहिले
चीनले श्रीलङ्कालाई दियो पाँच लाख डोज कोरोना खोप ३ हप्ता पहिले
उसको त बिहे भयो रे बोलको म्युजिक भिडियो सार्वजनिक १ हप्ता पहिले
विराटनगरमा स्वास्थ्यकर्मीमाथि आक्रमण, आरोपी पक्राउ ४ हप्ता पहिले
नगर प्रमुख सेजुवालबाट संक्रमितलाई पोषणयुक्त कोसेली ४ हप्ता पहिले
अन्नपूर्ण कोभिड हेल्पलाइनलाई नेलम्बोद्वारा स्वास्थ्य सुरक्षाका सामग्री ७ दिन पहिले
बाँदरमुढेका पीडितले अझै न्याय नपाएको गुनासो १ हप्ता पहिले
म्यानमारमा सेनाले सत्ता सम्हालेपछि ५४ जनाको मृत्यु, एक हजार भन्दा बढी पक्राउ ३ महिना पहिले